Jaho Wareer Ka Dhashay Sababta Uu Sadio Mane Ganaaxa Ugu Seegayo Kulanka Furitanka Xulkiisa Senegal Ee Koobka Qaramada Afrika. - Gool24.Net
Tababaraha xulka qaranka Senegal ee Aliou Cisse ayaa si rasmi ah u shaaciyay gool dhaliyaha kooxda qarankiisa Sadio Mane uu ganaax ku seegayo kulanka furitaanka koobka qaramada Afrika.
Inkaarta Sadio Mane ka haysata kulamada furitaanka koobka qaramada Afrika ayaa halkeeda ka sii socon doonta laakiin waxa uu jaho wareer ka dhashay sababta uu ganaaxa ugu maqnaan doono kulanka furitaanka.
Sadio Mane ayaa markii saddexaad xulkiisa Senegal uga soo muuqan doona koobka qaramada Afrika laakiin waxa uu markii markii labaad seegi doonaa kulanka furitaanka koobka Qaramada Afrika.
Mane ayaa sanadkii 2015 kii waxa uu seegay kulankii furitaanka ee koobkii qaramada Afrika ee lagu qabtay Equatorial Guinea markaas oo uu xulkiisa Senegal dhaawac kaga maqnaa kulankii Ghana wuxuuna ahaa dhaawac ku soo gaadhay kooxdiisii hore ee Southampton.
Laakiin markale Mane ayaa ganaax ku seegaya kulanka furitaanka ee uu xulkiisa Senegal la ciyaari doono Tanzani kaas oo ka tirsan Group C waana kulan la ciyaari doono maalinta July 23.
Maxay Tahay Sababta Muranka dhalisay Ee Sadio Mane uu ganaaxa ugu seegayo kulanka furitaanka koobka qaramada Afrika ee xulkiisa senegal?
Sadio Mane ayaa kaadhka digniinta ah loo taagay kulankii uu xulkiisa Senegal guusha 1-0 ka ahayd ka gaadhay Equatorial Guinea ee la ciyaaray 17 November 2018 kii, waxayna u muuqataa in kaadh digniin ah la siiyay kulankii Senegal ay guusha 2-0 ka kaga gaadhay xulka Madagascar ee 23 March 2019 laakiin kaadhkan ayaan ku jirin xogta kaadhadhka digniinta ah ee CAF diwaan galisay.
Kadib markii Sadio Mane laga waayay in uu kaadh labaad oo digniin ah ku diwaan gashan yahay intii lagu jiray heerkii guruubyada koobka qaramada Afrika loogu soo baxay waxay taasi keentay jaho wareer ah in ayna jirin sabab uu Mane ganaax ugu maqnaan karo mar haddii hal kaadh digniin ah oo kaliyi u diwaan gashan yahay.
Laakiin macalinka xulka Senegal ee Aliou Cisse ayaa cadeeyay in loo xaqiijiyay in ay waajib tahay in Sadio Mane uu ganaax ku seego kulanka furitaanka ee Tanzania.
tababare Aliou Cisse ayaa balan qaaday in maqnaanshaha Sadio Mane aanu xulkiisa saamayn ku yeelan doonin wuxuuna yidhi: “Waxaa waajib nagu ah in aqnaanshihiisu aanu anaga sina noo qasin. Hubaashii joogitaanka Sadio faa’iido ayuu noo yahay lakaiin la’aantii waxaanu sii ahaanaynaa xoog”.
“Xidhiidhka kubbada cagta Afrika ee CAF ayaa goaan ku gaadhay, sidaa daradeed, anagu meel iskama sii joogi karno” ayuu tababare Cisse hadalkiisa raaciyay.
Sadio Mane oo Liverpool ka soo caawiyay koobka UEFA Champions league intii lagu jiray horaantii bishan ayaa diyaar u noqon doona kulamada Algeria iyo Kenya ee Group C oo ka dhici doona magaalada Qaahira ee dalka Masar.